ချောင်းသာ ကြိုးဝိုင်းအတွင်း အရေခွံများ ခွာထားခံရသည့် တောဆင်ရိုင်း အသေတစ်ကောင် တွေ့ရှိ - Yangon Media Group
ချောင်းသာ ကြိုးဝိုင်းအတွင်း အရေခွံများ ခွာထားခံရသည့် တောဆင်ရိုင်း အသေတစ်ကောင် တွေ့ရှိ
ချောင်းသာကြိုးဝိုင်းအတွင်း အရေခွံခွာထား ခံရသည့်တောဆင်ရိုင်း အသေတစ် ကောင်ကိုတွေ့ရှိကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ၂၅ ရက်တွင် ပုသိမ်မြို့နယ် ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏မြောက်ဘက် ငါးမိုင်ခန့်အကွာ အောင်ကောင်းချောင်းအတွင်း တောဆင်ရိုင်းတစ်ကောင် သေဆုံးနေ ကြောင်းသတင်းအရ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိအဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်အဖွဲ့များ ပါဝင်သောပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ဆင် သေတွေ့ရှိရာနေရာသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ စစ်ဆေးချက်အရ ချောင်းသာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၄) အောင်ကောင်းချောင်း ဘေးဆိပ်ကြီးကျေးရွာအနီးတွင် အလျားခုနစ်ပေ၊ လုံးပတ်၁၁ပေခွဲ၊ အမြီးလေးပေ၊ အရပ်ရှစ်ပေခန့်၊ နားလတ်၊ ခွာအရှေ့ငါး၊ နောက်လေး၊ ငှက်ပျောကိုင်းသဏ္ဌာန် ကျောရိုးရှိ သော ဟိုင်းဆင်ထီး(အစွယ်မပါ)တစ် ကောင်သည် အရှေ့ဘက်သို့ဦးစိုက်လျက် ယာဘက်သို့လဲကျ၍ အရေခွံများ လေးပုံ သုံးပုံခန့်ခွာထားပြီး ယာလက်ပြင်တွင် မြားဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သစ်တောဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင် မောင်မြင့်က နိုဝင်ဘာ၂၆ ရက်တွင် ပြောသည်။
ဦးခင်မောင်မြင့်က ”တောဆင်ရိုင်းတစ်ကောင် သေဆုံးနေတာဟုတ်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ဆင်ပစ်မုဆိုးကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အခုတော့ မသင်္ကာသူတစ်ဦးကို တွေ့တယ်။ ရဲအဖွဲ့နဲ့ စစ်ဆေးနေပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ ဆင်၏အရေပြားအပါအဝင် ဆင်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများသည် ဈေးကွက်တွင်ဝယ်လိုအားမြင့်မားနေခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆင်များကို အမဲလိုက်သတ်ဖြတ်ရာ အဓိကနေရာတစ်နေရာဖြစ်လာနေ ကြောင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆင်များကို အဆိပ်လူးမြား(သို့မဟုတ်) အားပြင်းသည့်ရိုင်ဖယ်သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏သားရေကို ခွာယူခြင်းမခံရမီ ဆင်များသည် မချိမဆန့်ဝေဒနာကို တမြေ့မြေ့ခံစားရင်း သေဆုံးကြရပြီး ယင်းတို့၏သားရေများ၊ အစွယ်များနှင့် အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပသို့တင်ပို့ ရောင်းချကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တော ဆင်ရိုင်းများထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူ ဦးကျော်မြင့်ထွန်းက ”တောဆင်ရိုင်းထိန်းသိမ်းရေးကတော့ အများကြီးစိန်ခေါ်မှုရှိပါတယ်။ ဒီလောက် အခြေစိုက်စခန်းတွေလည်းရှိတယ်။ ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေ ကင်းလှည့်တာ တွေလည်းရှိတာ ဒါတောင်ဆက်လုပ် နေသေးကြသေးတယ်။ အခုက ပိုဆိုးတာက ဒေသခံတွေပါတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ အရင်ကတော့မသိနား မလည်လို့။ ပိုက်ဆံကျပ်သုံးလေး သောင်းရလို့လုပ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒီအကြောင်းတွေကို မီဒီယာ တွေမှာလည်းရေးတယ်။ ပညာပေး တွေလည်းလုပ်တယ်။ သူတို့သိတယ်။ သိသိကြီးနဲ့ လောဘတက်ပြီးလုပ် နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုက တော့ ဒေသခံကိုယ်တိုင်က မုဆိုး ဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ ဆင်တစ်ကောင်သတ်ရင် သူတို့အတွက် ကျပ်ဆယ့်လေးငါးသိန်း၊ သိန်းနှစ်ဆယ်လောက်ရနေတာဆိုတော့ စီးပွားရေးကိုဖြတ်လမ်းက လိုက်သလိုဖြစ်နေတာပေါ့”ဟု ပြောသည်။ တောဆင်ရိုင်းသတ်ဖြတ်မှုခံရသည့်ဒေသများမှာ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မန္တ လေးတိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၇ - ၁၈ခုနှစ် ဒုတိယခြောက်လပတ် အခွန်ရရှိမှု ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ် ကာလတူထက် ဘီလီယံ၂ဝဝကျော် လျော့နည်း
ဂျက်ကီချန်း၏ သမီး အက်တာနန်းချုတ်လန်းမ်က မိန်းကလေးချင်း လက်ထပ်ပြီးကြောင်း ဖွင့်ဟ
လားရှိုးမြို့ရှိ ဘုရားစေတီများနှင့် သာသနိက အဆောက်အအုံများ၌ ဆေးလိပ်ငွေ့(လုံးဝ) ကင်းစင်နယ်ြေ
အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကို ခြေချခွင့်ရသည့် ပထမဦးဆုံး ချီလီ ကစားသမားတစ်ဦး အဖြစ် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ဆ?
အင်းစိန်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် တိုးမြှင့်ပင်စင်များ အချိန်မီထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်
လယ်ဝေးမြို့နယ်တွင် မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးနှင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတို့ တိုက်မိရာမှ အခင်းဖြစ်နေရာ
ချဲလ်ဆီးထက် အတွေ့အကြုံ နုနယ်သော်လည်း ဗိုလ်စွဲရန် မူစတာဖီယုံကြည်၊ ကစားသမားဘဝ အကောင်းဆုံးန??
Internet Marketing Application Essay
တပ်မတော်အတွင်း၌ ဘာသာပေါင်းစုံရှိနေပြီး ဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်မှု မလုပ်ဟု သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးပြောကြား